Momba anay - Haidari Beauty Technology Co., Ltd.
Tongasoa eto hifandray aminay!
Niorina tamin'ny 2014, Haidari Beauty Technology (Beijing) Co., Ltd dia mpanamboatra matihanina izay mifantoka amin'ny fikarohana sy famokarana fitaovana laser sy milina Estetika ary milina indostrialy any Shina.
Haidari Beauty dia manome mavitrika laser laser (fizahana vava sy valva, famerenana hoditra, fanalefahana ny hoditra), laser Picosecond, laser Erbium (1550nm, 2940nm), milina fampihenana laser, milina fanesorana volo 808nm, milina fanamarihana, sns.
Haidari Beauty koa dia manome serivisy OEM sy ODM mifototra amin'ny fanirian'ny mpanjifa.
Amin'ny maha-Haidari Beauty anao ao anatin'ny orinasanao dia azonao atao ny manome aingam-panahy sy manome hery ny mpanjifanao hanatsara ny hatsaran'izy ireo ary hanatsara ny kalitaon'ny fiainany amin'ny fitsaboana azo antoka, azo vinavinaina ary mahomby.
Hatramin'ny niorenany, ny orinasa dia nifikitra tamin'ny fitsipika efatra momba ny "kalitao voalohany", "ny mpanjifa voalohany", "ny serivisy voalohany" ary ny "laza voalohany". Manantena ny fanatrehanao sy ny fiaraha-miasanay izahay, ary hanao ezaka iraisana amin'ny antony laser miaraka amin'ny indostrim-pirenena Shina.
Ny orinasa dia manana vondrona avo lenta elektronika, optika ary marina tsara milina fikarohana sy fampandrosoana mpiasa, miaraka amin'ny iraisam-pirenena mandroso fitaovana fandrefesana, hanatsara ny famokarana mahomby dingana sy ny kalitaon'ny fitantanana rafitra, mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra.
Manana ekipa teknika matanjaka ao amin'ny indostria izahay, traikefa matihanina am-polony taona maro, haavo famolavolana tena tsara, mamorona fitaovana avo lenta avo lenta.
Ny orinasa dia manokana amin'ny famokarana fitaovana avo lenta, hery ara-teknika matanjaka, fahaiza-manao fampandrosoana matanjaka, serivisy teknika tsara